BIOS ANAGHỊ AMALITE NA KỌMPUTA - BIOS - 2019
Onye ọ bụla n'ime anyị na nke a ma ọ bụ ọnọdụ ahụ nwere ike ihu na mkpa ịtọọ oge. Dịka ọmụmaatụ, n'oge egwuregwu, mgbe ị na-arụ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ n'ihe gbasara ịkwadebe efere dịka nhazi. Ọ bụrụ na i nwere smartphone, mbadamba ma ọ bụ kọmputa na ịnweta Ịntanetị, ịnwere ike iji otu n'ime oge ntanetịime oge, tinyere ike ịtọpụta sụgharịa ihe.
Timers na ụda igwe
Dịka anyị kwurula, ọrụ ole na ole dị n'ịntanetị nwere oge na-ada ụda, na nhọrọ kachasị dabara adabere na ihe ndị ị chọrọ. Anyị n'isiokwu a ga-atụle abụọ dị iche iche na weebụ weebụ: otu dị mfe, nke abụọ bụ ihe arụmọrụ, mma maka ọnọdụ dị iche iche na ọrụ.
Aha doro anya nke ọrụ a n'ịntanetị na ederede ederede na-ekwu maka isi ihe ya. Ma, na obi ụtọ anyị, na mgbakwunye na nkwụsịtụ ahụ, enwekwara oge nke omenala, nke a na-enye akwụkwọ dị iche. Ịmepụta oge achọrọ na ụzọ abụọ - ịhọrọ oge etiti oge (30 sekọnd, 1, 2, 3, 5, 10, 15 na 30 nkeji), yana ịbanye na oge etiti oge achọrọ. Iji mezue nhọrọ mbụ, enwere bọtịnụ iche. N'okwu nke abụọ, ọ dị mkpa site na iji aka bọtịnụ aka ekpe pịa "-" ma "+"si otú ahụ na-agbakwụnye oge, oge, na sekọnd.
Mbelata nke oge a, ọ bụ ezie na ọ bụghị nke kachasị mkpa, bụ na enweghi ike ịkọwa oge ahụ iji aka rụọ ọrụ. Enwere mgbanaka ngosi ngosi dị mma (ON / Gbanyụọ) nke dị n'okpuru ebe ntinye oge, mana enweghi ike ịhọrọ otu ụda olu egwu. Obere obere - bọtịnụ "Tọgharia" ma "Malite", na ndị a bụ nanị njikwa dị mkpa na ihe gbasara oge. Ịgafe site na ibe weebụ ma ọ bụ obere, ị nwere ike ịgụ ntụziaka zuru ezu na ojiji ya, anyị debere naanị ozi dị mkpa.
Gaa na Internet service Secundomer.online
Ọrụ ntanetị dị mfe site na ntinye ọhụụ na nke doro anya maka onye ọ bụla na-enye nhọrọ nke atọ (ịghara ịgụ oge nkwụsịtụ) nhọrọ maka izizi na nkwụsị. Ya mere "Ụdị oge" Ọ dị mma maka mmetụ oge. Ịga n'ihu "Oge egwuregwu" na-enye gị ohere ịhazi ma ọ bụ tụọ ọ bụghị naanị oge etiti maka mmemme ahụ, kamakwa ịmepụta ọnụ ọgụgụ nke ịbịaru nso, oge nke onye ọ bụla n'ime ha, yana oge oge ezumike. Ihe dị mkpa na saịtị a bụ "Oge egwuregwu"na-arụ ọrụ na otu ụkpụrụ dịka igwe elekere. N'ezie, naanị maka egwuregwu ndị dị otú ahụ na ọgụgụ isi dị ka chess ma ọ bụ na-aga ya bu n'obi.
Imirikiti ihuenyo ahụ echekwara maka ịpịakọta, bọtịnụ dị na ala. "Kwụsị" ma "Gbaa ọsọ". N'aka nri nke elekere dijitalụ, ị nwere ike ịhọrọ ụdị nke oge (kpọmkwem ma ọ bụ weghachite), yana chọpụta ụdị ụda ga -"Ihe niile", "Ụkwụ na mmecha", "Mmecha", "Nkwụsị"). Edebere ụkpụrụ ndị a chọrọ n'aka ekpe nke oku, na-eji sliders pụrụ iche, ọnụ ọgụgụ ya dịgasị iche maka oge ọ bụla ma dabere na njirimara ọrụ ya. N'ezie, na nke a na nkọwa nke Taimer ị nwere ike ịmecha - ohere nke ọrụ ịntanetị ga-ezuru karịa ọtụtụ ndị ọrụ.
Gaa na ọrụ Ịntanetị Taimer
Na nke a, isiokwu anyị na-abịa ná nkwubi okwu ezi uche dị na ya, n'ime ya, anyị lere anya abụọ dị iche iche, mana ọbụla dị mfe ma dị mfe iji oge ntanetịime na nkwupụta ụda. Secundomer.online bara uru maka ikpe mgbe ị dị mkpa ịchọta oge, na Taimer dị elu ga-aba uru mgbe ị na-egwu egwuregwu ma ọ bụ na egwuregwu asọmpi.